Ogaden News Agency (ONA) – Ogaysiis – Banaabax looga soo horjeedo xasuuqa Itobiya ay ka wado Ogadenya
Ogaysiis – Banaabax looga soo horjeedo xasuuqa Itobiya ay ka wado Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ March 13, 2014
Jaaliyada Ogadeniya ee Dalka Koonfur Africa waxay Ogaysiinaysaa dhamaan dadweynaha Somaliyeed ee ku dhaqan Dalka Koonfur Africa gaar ahaan Magaalooyinka Johannesburg Iyo Pretoria in laqaban doono Banaanbax si weyn loo soo qaban qaabiyay 18ka Bishan March.
Banaanbax waxaa lagaga soo horjeedaa Gumaysiga Itoobiya ee Xasuuqa qarsoon ka gaysata Dhulka Somaliyeed ee Ogadeniya. Banaanbaxan ayaa lagu hor qabanayaa – Pan African Parliament Gallapher Estate Midrand Johannesburg – halkaas oo ay iman-doonaan Madax ku sheegta Gumaysiga Itoobiya ee xalaashatay Xasuuqada shacabka Somalida Ogadeniya.
Hadaba waxay Jaaliyada Somalida Ogadeniya ku wargalinaysaa dhamaan Somalida ku nool Johannesburg Iyo Pretoria ee damiir fayaw oo Somaalinimo ku jirto leh inay ka qayb qaataan Banaanbaxa lagu-qaadayo Cadawga Somali ee Itoobiya. Ka qayb galayaasha Banaanbaxa waxaa u diyaara gaadiid ay kutagayaan goobta.
Taariikhda: 18/03/2014 , Saacada: 8:00 AM – 11:30 AM
Goobta : Pan African Parliament Gallapher Estate Midrand Johannesburg
Wixii Faah faahinintaa dheer kala xidhiidh Qaba-qaabayaasha Banaan-baxa
Birmadjoka@yahoo.com 0610466230— 0744098270